Ukutya okuqhelekileyo kweAguascalientes: Yindibanisela ye-gastronomy yaseMexico | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 08/09/2021 15:00 | IGastronomy, Mekhsikho
La Ukutya okuqhelekileyo kweAguascalientes ityebe kakhulu kwaye yahlukahlukene. Oku kubangelwa yimbali yombuso waseMexico, kodwa nakwiimveliso ezininzi zezolimo kunye neendlela zokupheka zokhokho ezibuyela kumaxesha angaphambi kweColombia.
Imeko yokuqala esiyichazileyo inxulumene nento yokuba iAguascalientes yasekwa njengendawo yokumisa kwindlela edibanisa ummandla ophakathi nenkunzi Ukunyaniseka kweNew SpainOko kukuthi, neSixeko saseMexico uqobo (apha sikushiya inqaku malunga nesi sixeko), eyakhiwe yakudala Itenchtitlán. Yayingummandla omkhulu obandakanya izinto zeSpanishi zaseNyakatho Melika, ingingqi esembindini welizwekazi, nakwisiqithi saseCuba nakwabo basondeleyo kuso. Kodwa, ngaphandle kokuqhubela phambili, siza kuthetha nawe ngayo yonke into enxulumene nokutya okuqhelekileyo kweAguascalientes.
1 Ukutya okuqhelekileyo kweAguascalientes: Ukuhlanganiswa kwaseMexico
1.1 I-idiosyncrasy yeAguascalientes kunye nobudlelwane bayo nekhitshi
1.2 Izitya eziqhelekileyo zeAguascalientes
1.2.1 Inkukhu yeSan Marcos
1.2.2 Uhlobo lweavocado olufakwe ipelepele
1.2.3 I-Menudo, okunye ukutya okuqhelekileyo kweAguascalientes ekufuneka uzame
1.2.5 Ihagu eyosiweyo eyanyayo
1.2.6 Izinto zegorditas ezifakiwe
1.2.8 Iziselo eziqhelekileyo zeAguascalientes
Ukutya okuqhelekileyo kweAguascalientes: Ukuhlanganiswa kwaseMexico
Ukusuka kule nto siyichazileyo, izitya eziqhelekileyo zeAguascalientes zezi Yindibaniselwano ye-gastronomy yaseMexico. Kuyinyani ukuba yenziwe ngendlela yemveli kwaye yongeza ezinye izithako. Kodwa, ngaphambi kokugxila kukutya okuqhelekileyo kweli lizwe, makhe sithethe kancinci malunga nembali kunye ne-idiosyncrasies. Ayilolize, i-gastronomy, umhlaba kunye nendaleko enxulumene ngokusondeleyo.
I-idiosyncrasy yeAguascalientes kunye nobudlelwane bayo nekhitshi
Njengoko besitshilo, iAguascalientes yasekwa njengendawo yokumisa indlela yesilivere, eyayidibanisa imigodi ye Zacatecas kunye SaseMexico City. Ime kancinci emantla engingqi ye Shallows, edibanisa amathafa amakhulu namathafa aneentaba ukuya kuthi ga kumawaka amabini eemitha ukuphakama.
Ngummandla ochumileyo kakhulu, ke ngoko akuzange kuthathe xesha lide ukuba amafama kunye nabarhwebi bahlale apho, benze icandelo lezolimo eliphumelelayo. Enkosi kuye, ukongeza, i-gastronomy yommandla ityetyisiwe.
Imozulu yeAguascalientes ngokwayo inegalelo elikhulu koku. Inika amaqondo obushushu aphakathi unyaka wonke, ngemiyinge ejikeleze i-17 degrees celcius. Abaqhele ukuya ngaphantsi kwesihlanu okanye badlule kumashumi amathathu. Inxalenye yayo, imvula inqabile, kodwa inemilambo, amadama kunye neendlela zakudala zokunkcenkceshela ezilungisa le meko.
Iziphumo zako konke oku zezolimo ezivelisa umbona, ingqolowa, isilili, iitapile, iitumato, iavokhado, umdiliya kunye neembotyi, ikakhulu. Yonke le mifuno ifunyenwe kwi-gastronomy yeAguascalientes, kunye ne inyama eveliswa licandelo layo elomeleleyo lemfuyo. Lo mmandla uneenkomo neehagu ezibalulekileyo, kodwa uneebhokhwe neegusha.
Nje ukuba sikuxelele ngezinto ezingafunekiyo zokutya okuqhelekileyo kweAguascalientes kunye neemeko zayo zembali, siza kugxila kwizitya zazo, ezinye zazo onokuzithanda.
Izitya eziqhelekileyo zeAguascalientes
Kwilizwe kwaye ikakhulu kwikomkhulu layo, ngokwesiko izidlo, ethi, njengoko igama lisitsho, bakhonze iintlobo ezahlukeneyo ze izimuncumuncu ngesidlo sangokuhlwa. Kananjalo, ezi zincinci iinkonzo ze tacos, enchiladas, flautas, tamales, tostadas okanye pozoleOko kukuthi, amalungiselelo emveli kulo lonke elaseMexico. Kodwa ngakumbi uphawu lweAguascalientes zizitya esiza kuthetha ngazo apha ngezantsi.
Inkukhu yeSan Marcos
Inkukhu sele iphekiwe
Kwabizwa kwakhona Inkukhu yeAguascalientes, sesinye sezitya zesiko zikarhulumente. Ihlala ilungiselelwe, njengoko igama layo lisitsho, kwifayile ye- FIndawo yaseSan Marcos, ethathwa njengeyona ibalulekileyo eMexico. Lo mbhiyozo ubuyela emva kwi-1828 kwaye wenzeka kwindawo yee-XNUMX yeehektare.
Phakathi kwezinto eziphambili ezithandekayo zezi Iintshatsheli zeSizwe zeCharrería kunye neziganeko zomculo. Kodwa i icon yayo yi Igadi yeSan Marcos, indawo yokuhamba entle eneebalustrade apho kugcinwa khona izinto ezininzi ezifanelekileyo.
Kodwa, ukubuyela kwinkukhu yeAguascalientes, ilungiswa ngokusa inyama kwaye emva koko yongeza isosi eyenziwe ngeziqhamo. Lo ngummangaliso omnandi obonisa iswekile, isinamoni, iipesika, amapere, iitumato kunye neeapilkosi. Emva koko yonke into iphekwe kunye kwaye isitya sikulungele ukugcinwa.
Uhlobo lweavocado olufakwe ipelepele
I-Aguacala chili pepper
El Tshile Sisithako esisisiseko kwi-gastronomy yaseMexico. Olu hlobo lwepepile luyatyiwa kwilizwe lonke. Kodwa iAguascalientes inendlela yayo yesiqhelo yokwenza ukuba yahlule kweminye imimandla.
Ukuqala, sisilwanyana esikhulu esikhutshwa ngaphakathi kwaye sigcwalisiwe. Iimveliso ezisetyenziselwa oku yinyama yenkomo kunye nengulube, itswele, ibiznaga, igalikhi kunye negwava eziyinika ubumnandi. Kungenxa yokuba olunye lweempawu zento echaphazela i-aguacalestense chili yile ayirhawuzeli.
I-Menudo, okunye ukutya okuqhelekileyo kweAguascalientes ekufuneka uzame
Nangona ukubonakala kwayo kunokukunika ukungonwabi, siyakuqinisekisa ukuba i-menudo sisitya esimnandi ekufuneka usizamile xa undwendwela iAguascalientes. Iyalingana neyethu iifowuni, kodwa ngamalungiselelo ahlukeneyo.
Ewe inenxalenye yesisu senkomo, kodwa namathambo, imilenze, itswele le-oregano, igalikhi, ipepile eyomileyo kunye netumato. Ngayo yonke le nto, isosi eyaziwa njenge isisu somhluzi. Ke ngoko, musa ukuba neentloni xa kufikwa kumba wokunandipha olu lonwabo.
I-birria, iklasikhi yokutya okuqhelekileyo kweeAguascalientes
Esi sisitya senyama. Yenziwe ngegusha okanye inyama yengulube ephekwe kwi-barbecue. Emva koko i-coriander, i-anyanisi kunye nepelepele zongezwa. Ngezi zithako kunye nejusi ephuma enyameni, kulungiswa umhluzi apho kufakwa khona itumato.
Kodwa yintoni eyokumangalisa kakhulu kukupheka kwayo. Yenziwe kwisitya sensimbi esifakwa equleni ngaphambili ebizaliswe ngamalahle omthi. Amagqabi eMaguey kunye nomhlaba zibekwe ngaphezulu kwaye zishiye malunga neeyure ezine. Okokugqibela, inyama ihanjiswa kunye nomhluzi okhankanywe apha ngasentla kwaye ihamba nayo Iitorilla zombona. Ngamafutshane, isitya esimnandi ngokulinganayo.
Ihagu eyosiweyo eyanyayo
I-carnitas yehagu eyosiweyo
Ngokwenyani, ihagu encancisayo okanye ihagu esencinci ngummangaliso wokutya otyiwa kwihlabathi liphela. Ngaphandle kokuya phambili, esi sidlo siyaziwa eCastile (nali inqaku malunga isixeko saseCastilian saseToledo). Kodwa abantu baseAguascalientes baneendlela zabo ezizodwa zokuyithatha.
Nje ukuba inyama yosiwe, iyacolwa kwaye iphakelwe ihamba nayo guacamole exutywe nejusi yokuqala uqobo. Nje ukuba kwenziwe oku, bayidla kwisitya okanye ngaphakathi kwetaco. Njengoko usazi, le ngu ingqolowa tortilla zifakiwe kwaye zisongelwe. Njengomdla wokufuna ukwazi, siza kukuxelela ukuba le ndlela yokugqibela yokuyidla ihlala iphelisa amatheko asebusuku, xa ilixesha lokugoduka.
Izinto zegorditas ezifakiwe
Esi sidlo sinemvelaphi yokutya kwesitalato, njenge burritos okanye, ngokuchanekileyo, tacos. Nangona kunjalo, kuye kwaba yinto emnandi ye-gastronomy yase-Mexico ngokubanzi kunye ne-Aguascalientes ngokukodwa.
Ikwenziwe ngesonka sengqolowa esimile njenge-tortilla. Emva koko igcwele ingulube, inkukhu okanye inyama yenkomo kwaye isikhumba. Le yokugqibela yisaladi emnandi elungiselelwe ngetswele, iviniga, ikhaphetshu kunye nesanqante. Okokugqibela, isosi eswiti okanye eqholiweyo yongezwa ukuhambelana nesidlo sangokuhlwa.
Iguava itshizi flan
Iilekese zibaluleke kakhulu kukutya okuqhelekileyo kweAguascalientes. Phakathi kwabo, sinokukucacisela ukhilimu kunye nebhotolo, yena irayisi yomdiliya kunye nekhokhonathi egayiweyo okanye iqokobhe, eziziintlobo ngeentlobo zesonka esimnandi.
Nangona kunjalo, sifuna ukukucaphula iguava itshizi flan ngokuba mnandi ngokwenene. Izithako zalo ngamaqanda, ubisi olujiyeneyo, i-caramel kunye netshizi cream. Kodwa igalelo lokuqala lommandla yiguava, isiqhamo esimnandi esikhula ngobuninzi eAguascalientes.
Iziselo eziqhelekileyo zeAguascalientes
Asikwazanga ukulugqiba uhambo lwethu lokutya okuqhelekileyo kweAguascalientes ngaphandle kokukuxelela malunga neziselo zabo. Phakathi kwabo bengenabo utywala, sikucebisa ukuba uzame mead, ethi ikhutshwe kwimaguey, esinye isityalo esiqhelekileyo kuloo ndawo. Kwaye naye Ukuvutha okumnandi, eyenziwe ngeediliya, isinamoni kunye neswekile.
Ngokwenxalenye yayo, phakathi kweziselo ezinxilisayo une-brandy, ii-liqueurs ezivela kwizicatshulwa zeziqhamo kunye ne-brandy. Kodwa ngaphezulu kwayo yonke le nto ikholoni, ekwabizwayo busuku.
Yotywala bemvelaphi yangaphambi kweColumbian eyenziwe kukuvundiswa kwe-nopal kunye nezinye iipereyiki. Ngokwesiqhelo, i obomvu obomvu obomvu, ke isiselo sinalo mbala. Ukwenza oku, incindi yezi zityalo iphekwe kangangeeyure ezimbini okanye ezintathu kwaye ishiywe ukuba ibile iintsuku ezininzi. Isiphumo sinencasa emnandi, nefizzy enencasa kakhulu.
Ukuqukumbela, sikubonisile ezinye zeesitya zeAguascalientes, ilizwe laseMexico elinento emnandi yokutya kwaye edibanisa izinto ezinokuthanani neempembelelo ezivela kwezinye iindawo zelizwe. Nangona kunjalo, sinokuchaza ezinye iindlela zokupheka. Umzekelo, Pocholas, ezenziwa ngenyama yenkukhu yenyama exovwe njenge-steak kwaye yenziwa ngeembotyi kunye nerayisi. Okanye i ithenda kwi morita chile isosi, yona yehagu ehamba nesosi yolo hlobo lwesilili kwaye inewonga lokuthathwa njengesona sidlo sihle kwilizwe. Ngamafutshane, esinye isidlo sokutya esiqhelekileyo seAguascalientes yile inyama katatada, eneepelepele kunye nemole kwaye, emva kokumuncwa, inikwa irayisi, iimbotyi kwaye, ewe, iitillillas zombona. Ngaba awucingi ukuba zizitya ezimnandi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » America » Mekhsikho » Ukutya okuqhelekileyo kweAguascalientes